Haikanto sy fitaizana :: Entanin’ny Is’Art Galerie hikajy ny tontolo iainana ny ankizy • AoRaha
Hiompana tanteraka amin’ny atrikasa fanentanana ny ankizy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitandroana ny fahadiovana ny fotoana hatokan’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo, amin’io volana marsa ho avy io. Lohahevitra voizin’ity foibe ity ny hoe “Ndao hanamaitso ny tontolo”.
Ao anatin’ny fampianarana homena an’ireo ankizy mpiofana ny fanehoana ny aingam-panahy amin’ny alalan’ireo entana sy ny singa samihafa heverina fa tsy azo ampiasaina intsony, kanefa azo kirakiraina hanehoana ny kanto sy ny hanamboarana fanaka hafa kely. Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny ray aman-dreny manam-paniriana hampiofana ny zanany. Mitentina 10 000 ariary isan’ankizy ny saran’ny fiofanana.
Samy tompon’andraikitra amin’ny fahalotoan’ny tontolo iainana ny rehetra. Ao anatin’io atrikasa io no hampahafantaran’ireo mpanakanto mivondrona ao amin’ny foibe Is’Art Galerie amin’ny kilonga ny hamaroan’ny fandotoana sy ny fako ariany. Tanjona ny hanova ny fomba fiainan’ny tsirairay amin’ny andavanandro.
Fizarana traikefa :: Hampianatra ny teknikan’ny saripika ny Next A
Tontolon’ny dihy :: Hizara traikefa any ivelany ny kaompania Rary